किन चढाइन्छ शिवलिङ्गमा दुध ? यस्तो छ कारण ! - Sakaratmak Soch
किन चढाइन्छ शिवलिङ्गमा दुध ? यस्तो छ कारण !
शिव, महादेव, भोले शंकर वा नीलकण्ठ । भगवान शिव धेरै नामहरुबाट परिचित छन् । भगवान शिवको बारेमा भनिएको छ कि उनी विनाशको देवता पनि हुन्, अर्थात्, जब सृष्टिमा पापको एक अतिरिक्त समयले बास गर्छ शिव विनाशको माध्यमबाट फेरि संसार सिर्जना गर्दछन् । अर्कोतर्फ, यदि हामी भगवान शिवको छनौटको बारेमा कुरा गर्छौं, तब उनको छनौट अन्य देवताहरुभन्दा बिल्कुल फरक छ ।
भगवान शिवको अर्कोरूप ’शिवलिंग’ पनि धेरै तरिकामा फरक छ । केहि यस्ता रितिरिवाज शिवलिंगको पूजामा पालन गरिन्छ जुन भगवान शिवलाई धेरै मनपर्छ । शिवलिंगलाई दुधले नुहाइन्छ । यो विश्वास गरिन्छ कि भगवान शिव दूधसँग अभिषेक गर्न मन पराउँछन् । तर के तपाईलाई थाहा छ शिवलिंगलाई दूधले नुहाइन्छ । वास्तवमा यसको पछाडि एउटा कथा छ । सागर मन्थनको सम्पूर्ण कथा विष्णुपुराण र भागवत पुराणमा वर्णित छ ।
जसमा एउटा कथा भेटिन्छ । यस कथा अनुसार जब समुद्र मन्थनको समयमा विष उत्पन्न भएको थियो, सारा संसारमा यसको गहिरो प्रभावमा पर्‍याे । जसको कारण सबै मानिसहरु भगवान शिवको शरणमा आए किनभने भगवान शिवसँग मात्र विषको तीव्रता सहन सक्ने शक्ति थियो ।
विषको घातक प्रभाव देवी गंगामा पर्न थाल्यो, जो शिव र शिवको कपालमा विराजमान थिइन् । यस्तो अवस्थामा शिवलाई शान्त पार्नको लागि पानीको नम्रता पनि पर्याप्त थिएन । सबै देवताहरूले उनलाई दूध लिन आग्रह गरे । तर उनको आत्माको बारेमा चिन्ता गर्ने स्वभावको कारण, भगवान शिवले उनीबाट दूध स्वीकार गर्नको लागि अनुमति मागे ।
नरम र शुद्ध दूध प्रकृतिद्वारा तुरुन्तै शिवको यो विनम्र अनुरोध स्वीकार गरियो । शिवले दूधको उपभोग गरे जसले उनले पिएको वीष तीव्रता धेरै हदसम्म घटायो तर उनको घाँटी सदाको लागि निलो भयो र उनी नीलकण्ठको नामले परिचित भए ।
कठिन समयमा, आफ्नो बारेमा चिन्ता बिना, शिव र संसारलाई मद्दत गर्न शिवको पेटमा गयो र विषको तीव्रता सहन नसकेर दूध धेरै प्रिय छ । अर्कोतिर, सर्प शिवलाई धेरै प्यारो छ किनकि सर्पले विषको प्रभावलाई कम गर्न आफैंमा विषको तीव्रता अवशोषित गरेको थियो । त्यसैले धेरैजसो सर्प धेरै विषालु हुन्छन् ।
मेकअप आर्टिस्टको सुझाव : चार्डपर्वमा कस्तो मेकअप उपयुक्त ?